Maxaa loogu hadlaaya Shirka Jaamacada Carabta ee maanta ka furmaya sacuudiga! – War La Helaa Talo La Helaa
Maxaa loogu hadlaaya Shirka Jaamacada Carabta ee maanta ka furmaya sacuudiga!
By madoobe	 On Apr 15, 2018
Magaalada Dammaam ee dalka sacuudiga ayaa maanta waxaa ka fur maaya shirka 29aad ee ururka Jaamacadda Carabta.
“Madaxweyne Farmaajo waxa uu khudbad ka jeedin doonaa shirka, isagoona Madaxda kale ee waddamada Carabta la wadaagi doona xaaladaha siyaasadda, ammaanka iyo horumarka ka socda dalka.” Ayuu yiri Agaasimaha Xadiiska Warfaafinta Madaxtooyada.